အမေရိကန်နိုင်ငံသားလိုအပ်ချက်ကဘာတွေလဲ? | USAHello | USAHello
သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ပဌမ, သငျသညျလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသေချာအောင်. အခြေခံအမေရိကန်နိုင်ငံသားလိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိသားစုဝင်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းအသေးစိတ် Read.
နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျတွေ့ကြံယေဘုယျအားရပါမည် t ကိုသူလိုအပ်ချက်များကိုအောက်ပါ:
သငျသညျကိုအနည်းဆုံးဖြစ်ရပါမည် 18 အသက်အနှစ်.
လူအများစုများအတွက်, သင်တစ်ဦးနေထိုင်သူအဖြစ်အနည်းဆုံးငါးနှစ်ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်. သို့သော်, သင်၏လင်သို့မဟုတ်မယားနိုင်ငံသားပါလျှင်, သငျသညျသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှလျှောက်ထားနိုင်မည်အကြောင်း. အကြောင်းပို Read အိမ်ထောင်ဖက်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
သင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပသိသိသာသာခရီးစဉ်ခဲ့ကြမပြုရ. အားလပ်ရက်နှင့်ပြည်ပမိသားစုကြည့်ဖို့တိုတောင်းသောခရီးစဉ်များအဆင်ပြေများမှာ, သင်မူကားရှည်လျားခရီးစဉ်ခဲ့ကြပါလျှင်, အဲဒါကိုသေချာသင်အရည်အချင်းပြည့်မီအောင်မလျှောက်ထားမီရှေ့နေမှပြောဆိုရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သင်လုပ်နိုင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
သင်တို့သည်နောက်အဓိကရာဇဝတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုရှိရမည်. အသေးစားပြစ်မှုများ, ထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာလက်မှတ်အဖြစ်, အဆင်ပြေများမှာ, သင်မူကားမဆိုအဓိကပြစ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားမရနိုင်. အများဆုံးသေးငယ်တဲ့ပြစ်မှုအဆင်ပြေကြောင့်အမြဲတမ်းဒီအကြောင်းရိုးရိုးသားသားဖြစ်, သင်မူကားသင်၏လျှောက်လွှာအပေါ်မုသာမပါလျှင်, ဒီသင်၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ရစေနိုင်သည်. သင်ပင်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရစေခြင်းငှါ,. သင်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ကြပါလျှင်, ရှေ့နေပြောပြရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်က. သူတို့ကသငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိစေမည်.
သငျသညျကိုလေ့လာနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရမယ်, စီးပွားရေးကို, နှင့်သမိုင်းသင်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များစာမေးပွဲနိုင်အောင်.
သင်ဖတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်, ရေးသား, အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်နဲ့နားထောင်ရန်. မသန်စွမ်းလူဦးသို့မဟုတ်လူတို့အဘို့အခြို့သောချွင်းချက်ရှိပါတယ်ကျော်ရှိပါတယ် 50 အချိန်ကြာမြင့်စွာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ခဲ့ကြသူ. နှောင်ကြိုးများကို: D အတွက်အဟောင်းတွေနဲ့ disabled လူများအတွက်ချွင်းချက်အကြောင်းကို Read.
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်စေခြင်းငှါ. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဝန်ဆောင်မှုကတဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်. အွန်လိုင်း Read သို့မဟုတ်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်ကြည့်ဖို့ဤစာရွက်စာတမ်းကို download လုပ်ပါ.
သင်ဖတ်တဲ့တိုတောင်းသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစမ်းသပ်မှု ယူ. အင်္ဂလိပ်ဝါကျစကားပြောဆို.
အမေရိကန်သမိုင်းနှင့်အစိုးရအပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များစာမေးပွဲယူပါ. ဒီစာမေးပွဲတွင်, သငျသညျဖြေဆိုရပါမည်6ထဲက 10 မှန်ကန်စွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို, သမိုင်းနှင့်အစိုးရ.
သငျသညျကို USA မှသစ္စာရှိမှုအပေါင်ဘယ်မှာသစ္စာ၏အကြိနျကိုယူ.
သငျသညျသင်ယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါသင်တို့ရှိသမျှသည်ဤခြေလှမ်းများအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတှေ့နိုငျ ဘယ်လို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထား.